फर्किएको शान्त फुटबल
ऋग्वेद शर्मा आइतबार, जेठ ४, २०७७, ११:४६
काठमाडौं- जर्मनमा लिग फुबटल बुन्डेस लिगा शनिबार सुरु भयो। जसले रोकिएको विश्व खेलकुद गतिविधिमा नयाँ आश सञ्चार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको के लिग गएको हप्ता नै सुरु भएको थियो भने बेलारुस र निकारागुवामा फुटबल रोकिएनन्।
तर युरोपभर मात्र होइन विश्वभर रोकिएका ठूला लिगमा सबैभन्दा पहिले बुन्डेस लिगा सुरु गर्न सम्भव हुनुले दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखिको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को त्रासबाट बाहिर निस्कनसमेत मद्धत गरेको विश्लेषण आइरहेका छन्।
तर माहामारिमा फर्किएको फुटबल पहिलेको जस्तो लाग्दैन। टेलिभिजनको पर्दामा खेल हेरेका दर्शकलाई पनि एकातिर फुटबल फर्किएको खुशी छ भने अर्कोतिर निरशलाग्दो खेलशैलीले निराशा। मैदानमा खेलाडीलाई देखाउँदा पनि पृष्ठभूमिमा आइरहने ‘मधुरो कोलाहल’ को अर्थ यो समय थाहा भइरहेको छ।
खेलाडीहरु खेलका लागि मैदानसम्म आउँदा पनि शारीरिक दुरी बनाउनका लागि धेरैवटा बसको प्रयोग गरिएको थियो। उनीहरु सबैले मास्क लगाएका थिए। खेलमा सहभागी हुनेहरु सबै होटलमा एक हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। र उनीहरुको कोरोना भाइरस परीक्षण नियमित रुपमा भइरहेको थियो।
गोल गरेपछिको ‘सेलिब्रेसन’मा पनि केही खेलाडीले शारीरिक दुरी बनाएर नै खुसी साटिरहेका देखिन्थे भने केहीले कुइनानेरको भागले एकअर्काको काँधमा हात राखेर खुसी साटिरहेका थिए। जसले गोलको उत्साहलाई मर्न दिइरहेको थिएन। शनिबार भएका ६ खेलमा मात्रै १६ गोल भएका थिए। केही खेलाडीले सामान्य अवस्थामा जस्तै गोलपछि एकअर्कालाई अंगालोसमेत मारेका थिए।
खेल गर्ने समय रंगशाला बाहिर नै पनि धेरै दर्शक उपस्थित भइदिएर अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने अनुमान पनि गलत देखिएको छ। शनिबार बुन्डेस लिगाका खेल भएका रंगशाला बाहिरका दृश्य पनि शान्त थियो। दर्शकहरु जम्मा भएका थिएनन्।
प्याडेरबर्नसँगको गोलरहित बराबरीपछि डसेलड्रफका प्रशिक्षक रोस्लरले भनेका थिए- ‘आजको दिन अलि अनौठो भयो, म अलि भावुक मान्छे छु, खेलाडीहरुलाई अँगालो हालेर हौसला दिन राम्रो लाग्छ जुन मैले आज गर्न पाइनँ।’
डर्टमुन्डका प्रशिक्षक लुसियनले भनेका छन्- ‘मैदानमा कुनै हल्ला थिएन, गोलमा तपाइँ एक्लै कराएको जस्तो सुनिन्छ, उत्कृष्ट पास दिएर उत्कृष्ट गोल गरिएको छ तर पनि केही नभएको जस्तो भइरहेको छ।’
पारित भयो खेलकुद विधेयक : के छन् नयाँ विषय?
कमल थापासँग खेल संवाद : ‘खेलकुदले नै राजनीतिमा डटिरहन सकेको हुँ’
पारित भयो खेलकुद विधेयक : के छन् नयाँ विषय? राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक,... बिहीबार, जेठ ८, २०७७
मैदान फर्कने हुटहुटी स्पाइक हान्न लाग्दा एक्कासि कोर्टमा ढलेकी उनलाई के भएको थियो, त्यतिबेला कसैलाई थाहा थिएन। एपिएफले जितेको अन्तिम सेटमा पनि दर्शकमा नि... सोमबार, वैशाख २९, २०७७
भारतमा कोरोना : संक्रमितको संख्या १ लाख ५० हजार नाघ्यो बुधबार, जेठ १४, २०७७
विश्वभर कोरोना : ५५ लाख ८४ हजार संक्रमित, ३ लाख ४९ हजारको मृत्यु बुधबार, जेठ १४, २०७७